Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၌ရှိကြ၏: an 'elegant', overpriced gadget 'you don't need' - သတင်း Rule
Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၌ရှိကြ၏: တစ်ဦး '' ကြော့ '', သငျသညျမလိုအပ်ပါဘူးအလွန်အမင်း gadget က ''’
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း: ကို 'ကြော့' ', '' သင်မလိုအပ်ပါဘူး '' အလွန်အမင်း gadget က” ဆမ် Thielman ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 8th April လပေါ်များအတွက် 2015 17.06 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ပထမဦးဆုံးအပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့သည်, errr, မျက်နှာပြင်အချိန်တွေအများကြီးရတဲ့? ဒါဟာ "စျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံးစမတ်နာရီ" ရဲ့, "တစ်ဦး bulbous, သငျသညျတစျဦးမလိုအပ်ပါဘူးဖော်ရွေနည်းနည်းအရာ "နှင့်" ".
အမိန့်ကိုစတင်နီးပါးသုံးပတ်က၎င်း၏အရာရှိတဦးလွှတ်ပေးရန်မပြုမီနှစ်ရက်မပြုမီ, Cupertino ရဲ့ PR စနစ်ယန္တရားတစ်ခုကို select လုပ်ပါအနည်းငယ်ကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ကိရိယာ၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းမှာသူတို့ရဲ့လက်ကောက်လေ့ကျင့်ခန်းမှခှငျ့ပွုခဲ့. သုံးသပ်ရေးတစ်ကယ့်သတင်းပုံပြင်ကိုခံထိုက်သောသူဗီဒီယိုများနှင့် Interactive နှင့်အတူအပေါငျးတို့သမှတ်တိုင်များဆွဲထုတ်ခဲ့ကြပေမယ့်လွှမ်းခြုံကျယ်ပြန့်သည်အနေဖြင့်, ရလဒ်ကိုရောထွေးနေကြသည်. ထိုစိတ်အားထက်သန်နည်းပညာလူစုလူဝေးအကြီးအကျယ် onboard ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, များစွာသော misgivings ရှိသည်နှင့် Apple ကလည်းရည်းစားသည် clubby ဇိမ်ခံလက်ပတ်နာရီကမ္ဘာအဖြစ်အလွယ်တကူမှားယွင်းမဟုတ်ကြောင်းထောက်ပြ.
အဆိုပါလက်ပတ်နာရီ "Bliss ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့သာလျှင်တစ်ဦးမတ်စောက်သင်ယူ Curve "ပြီးနောက်, New York Times ကိုအညီ. "ဒါဟာနေ့တွင်သာခဲ့4ငါ၌အကြော့ရာလမ်းကိုတန်ဖိုးထားစတင်ခဲ့ကြောင်း0ငါ၏အလက်ကောက်ဝတ်ပေါ်ကွန်ပျူတာပဲအခြားမျက်နှာပြင်ထက်ပိုမိုခဲ့," ရေးသားခဲ့သည် Farhad Manjoo. The Wall Street Journal မှလျော့နည်း puffy ဖြစ်ပါသည်: "အဘယ်ကြောင့်လက်ပတ်နာရီရဲ့ဘက်ထရီကိုအတိတ်လုပ်မပေးနိုငျ 10 p.m. ငါကငျြ့သုံးကြောင်းရက်?" အံ့ဘွယ်သောအမှု ဂျို Stern ပာ.
အများစုကပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနည်းပညာကမ္ဘာ့အပူဆုံးစက်ကိုစောစော access ကိုပေးသနားခဲ့ပြီးမှအဘို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့်အတူ tinged ပေါ်လာ. "ဟု Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တီးတိုးလက်ရာလက်အကြောင်းအရာအားလုံး,"Mashable ရဲ့လှံ Ulanoff ရှူရှိုက်. The Verge ရဲ့ Nilay Patel က - "အ bulbous ၏သူ, ဖော်ရွေနည်းနည်းအရာ "- ပုံရသည်, သတိ, enamored. သို့သော်ထိုစည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်အဘယ်သူအားမျှအရည်အချင်းမရှိဘူးဆိုပြီးများမှာ, တစ်ဦးက Apple ထုတ်ကုန်ပစ်လွှတ်များအတွက်နှိုင်းယှဉ်ရှားပါး.
ပင် ဒါဝိဒ်သည် Pogue, မကြာခဏလည်းမကြာခဏ Apple ရဲ့ဘေးထွက် ယူ. အဘို့သံသယဝါဒီများက dinged, အ gadget ကအလွန်အမင်းကြောင်းမှတ်ချက်ပြု. "Apple ကဤသူအသက်ရှု-catchingly ဈေးနှုန်းမြင့်မားနှငျ့အဘယျစဉ်းစားခဲ့?"ဟုသူက Yahoo ကမှာရေးသားခဲ့သည်. "ဒါကြောင့်သီးသန့်အဖြစ်ကဤပုံဖျောဖို့မျှော်လင့်နေ, rarefied, Aspire ထုတ်ကုန်? တစ်ဦးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အားဖြင့် ,000 ပုံစံ, ထိုသို့စေရန်မျှော်လင့်နေပါတယ်0နှင့်0နာရီလျှော့စျေးများတူ?"
အဆိုပါ upshot ဘက်ထရီအသက်တာသည်ကောင်းကြောင်းဖြစ်ဟန်, သင်တစ်ဦးဘုန်း Fitbit ကြောင့်သုံးနေတယ်မဟုတ်လျှင် (သောကမျိုးဖြစ်ပါသည်), လျှောက်လွှာတင်အဆအလွန်ရှည်လျားဖြစ်ကြောင်း (Apple ကနောက်ဆက်တွဲဗားရှင်းအတွက် fix မှကတိထားတော်မူသော) ကချစ်စရာကောင်းတဲ့နည်းနည်း device ကိုရဲ့, မဟုတ်လျှင် ၏ သင်တန်း သငျသညျ သဘောကှဲ, ဒါပေမယ့်နှေးနှေးဖွင့်, အထူးသဖြင့်အလိုလိုသိနှင့်ဖြစ်နိုင်မလွှဲမရှောင်အဆင့်မြှင့်ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေရကျိုးနပ်မယ့်မ.
အ Haute horologie posse နှင့်နည်းပညာကမ္ဘာအကြားတစ်ဦးအခြေခံဝါဒီအုပ်စုခွဲလည်းရှိပါတယ်: ယခင်အတွက်, စားသုံးသူများကငွေတစ်ဦးထူးမြတ်သောငွေပမာဏကိုတစ်ဦးအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသော device ကိုမျှော်လင့်ထား. အဆုံးစွန်သောခုနှစ်တွင်, အဆငျမပွမှေုနှင့်အပြစ်အနာအဆာရိုးရိုးထပ်ထုတ်ကုန် iterating ထွက် ironed ရာ, နည်းပညာအသစ်အတုံးမကြာခဏထိုသို့ပြုမှဟူ.သာအဘယျအများ၏အသစ်အဆန်းချီးကျူးသည်. "ဟုအဆိုပါ Cartier မတူဘဲငါကောလိပ်ကျောင်းဆင်းပွဲများအတွက်တယ်, မူရင်း Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့လှပမှုမကြာမီညှိုးနွမ်းလိမ့်မည်,"Stern ပာကြည့်ရှုလေ့လာ.
Apple ကဒီနေရာမှာနှစ်ဦးစလုံးစခန်းများနှစ်သက်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်, နှင့်ရောထွေးရလဒ်များကိုနှင့်အတူ. "[ငါ]ပထမမျိုးဆက်အတွက်အရာအားလုံးပြုပါရန်ကြိုးပမ်းမှု n, Apple ရဲ့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဆဲအလိုရှိသောခံရဖို့ပဒေသာပင်အရွက်,"ဖြစ်သူ Scott Stein က CNET မှာရေးသားခဲ့သည်. "အခြားယံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Short ဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်အဆင့်မြင့်ဈေးနှုန်းများယခုများအတွက်အကြီးမားဆုံးအလံပါ။ " Patel ကလည်းအဘို့အကြောင်းမှတ်ချက်ပြု 0, Apple ကဖောက်သည်များဖြစ်ကောင်းညဥ့်အခါမှာတျပေါ်တွင်တင်မှတစ်ဦးအားသွင်းရပ်တည်ချက်ထိုက်. သငျသညျတစျခုရှိနိုင်ပါသည်, သင်မူကားထွက် Shell သာလြှငျ ,000 ရွှေဗားရှင်း.
device ကိုပတ်ပတ်လည်က Apple သည်အဆုံးလေးနက်သောမေးခွန်းများကိုတ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့သည်စျေးကွက်၏အရွယ်အစားနောက်ဆုံးမှာဖြစ်လိမ့်မည်ကားအဘယ်သို့. အစောပိုင်းမွေးစားဝတ်စရာပရိသတ်တွေများအတွက် (မအထူးသဖြင့်ကြီးမားသောဆက်ပြောပါတယ်), အစမတ်နာရီအတိအကျသစ်တစ်ခုတီထွင်မဟုတ်ပါဘူး - စျေးပေါဗားရှင်းထက်လျော့နည်း run0အကြီးက Apple ကိုယှဉ်ပြိုင် Samsung ရဲ့မော်ဒယ်အကြောင်းမှာချွတ်စတင်0ရုံအောက်မှာမှတက်အထိ 0. Apple ကလက်ပတ်နာရီချစ်သူများအစျေးကြီး version ကိုဝယျပါမညျမျှော်လင့်နေပါတယ် (အ GUTS အားလုံးရုပျပစ်စညျးအတူတူပါပဲအဖြစ်ရွှေအမှုကိုသာအဓိပ္ပါယ်ရှိသောကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်). အစစ်အမှန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်စတင်မည် 24 ဧပြီလကဖောက်သည်ကိုသူတို့ငွေသားများဖြစ်စေမဆုံးဖြတ်ရသောအခါ, ဒါမှမဟုတ်လက်ကောက်ဝတ်အာကာသ, Apple ရဲ့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့များအတွက်.
25546	0 ပန်းသီး, Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့, အပိုဒ်, စီးပွားရေး, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, မီဒီယာ, သတင်း, ဆမ် Thielman, နည်းပညာ, နာရီများ, ဝတ်ဆင်ကနည်းပညာ
← 20 အကောင်းဆုံးက iPhone နှင့် iPad app များကိုနှင့်ဂိမ်းများယခုအပတ် စျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံးခေါက်စက်ဘီးကဘာလဲ? →